လောက၌ ဆင်းရဲမွဲနေရခြင်းသည် ရှက်စရာမဟုတ်..ထိုဆင်းရဲမွဲတေမှုကနေ လွတ်မြောက်အောင် ရုန်းမထွက်ခြင်းသာ ရှက်စရာဖြစ်ချေ၏..
ပြီးခဲ့တဲ့လက အမှတ်မထင်ယိုးဒယားနိုင်ငံ၊နယ်စပ်ရွာလေးတစ်ရွာဖြစ်တဲ့ဘန်ပုံရွာ(Ban Pon village)
လိုက်ရိုက်နေတုန်း သူကတစ်ချို့ပန်းချီကားတွေကို မရိုက်ဘို့တောင်းပန်လာတဲ့အတွက်မိမိလည်းအလိုက်
သိစွာနဲ့မရိုက်ခဲ့ပါဘူး။ခင်ဗျားဒီပန်းချီကားတွေကို ဘာလုပ်ဘို့အစီအစဉ်ရှိလဲမေးတော့ သူကယခုလိုပြန်ပြော
တွေလေဗျာ..ဘယ်တော့မှရောင်းမစားဘူးလို့ စဆွဲစဉ်ကတည်းက ဆုံးဖြတ်ထားပြီးသားပါ..အေးတစ်ခုတော့
သွားမှာပါ..ဟုတ်တယ်လေဗျာ ပန်းချီလက်ရာတွေဟာ အခုနောက်ပိုင်းဒစ်ဂျစ်တယ်ကင်မရာတွေ၊ photo
shop တွေရဲ့ဝါးမျိုခြင်းကို ခံနေရပြီမဟုတ်လား..ဒီတော့ ပန်းချီမချစ်တဲ့သူတွေဟာ ပန်းချီလက်ရာတန်ဖိုးကိုိုိုိုိုို
ယ္ခုဘလော့မှာ တင်ပြထားတဲ့ပန်းချီကားတွေဟာ စက်တင်ဘာမြင်ကွင်းပုံကလွဲရင်ပုံတူပန်းချီကားတွေဖြစ်ပြီး
ပို့စ်တင်သူ- ဆန်းသစ်အောင် ===အချိန် 12/07/20090ဦးက ဒီလိုမြင်တယ်
ဆရာ ဆရာမများ၊ကျောင်းသား ကျောင်းသူများဟာစာသင်နားချိန်နှင့်ကျောင်းအားရက်တွေမှာစာကြည့်တိုက်
သူဖြစ်သဖြင့်ဘယ်သူကမှ သူ့အစွမ်းအစကို ဒီလိုအခြေနေရောက်လာလိမ့်မည်မထင်ထားကြ၊
ခုကိုရဲ့ဝင့်စွာ ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းတတ်၏၊ သူတစ်ပါးကို လွယ်ကူစွာ အပူကပ်လေ့မရှိ၊တတ်နိူင်သမျှကူညီတတ်၏၊
အခုထိမှတိမိနေသေးသည်က သူနှင့်အတူသွားပြီး ပစ္စည်းတစ်ခုဝယ်တော့မည်ဆိုလျှင်လွယ်လွယ်နှင့်ဝယ်ယူ
ရိုးထုံးစံမရှိခြင်းပင်၊၀ယ်ခါနီးတွင် သူကအမြဲစဉ်းစားတတ်သူ ဖြစ်သဖြင့်မိမိက သူ့ကို အားမရခဲ့၊နောက်တော့မှ
တဖြည်းဖြည်းစဉ်းစားကြည့်ရာ သူဟာအလုပ်တစ်ခုကို ဦးနှောက်ဖြင့်အသုံးချပြီးလုပ်တတ်သူဖြစ်ကြောင်းသ
သူစာကြည့်တိုက်ဖွင့်မယ်လုပ်တော့ လသာသာဝရံတာဘက်မှာသူနှင့်အတူမိမိရယ်၊ ဘ၀တူ ၀ါသနာတူရွာသား
ရဲ့(အထာ)အခြေနေကိုသိထားကြသူများပီပီဤ သို့ပြန်ပြောလိုက်၏၊ အေးကွာ..ဟုတ်တယ် ဒို့ရပ်ရွာကဘာဘဲ
လုပ်လုပ် အထနှေးတတ်တယ်ဟ...ဒို့တုန်းကလဲ တော်တော်စခဲ့ရတာ......အထနှေးတော့ ဆွပေးမှရမယ်လေ..
အဲ စပြီးရင်တော့ ရွာကတဖြည်းဖြည်းနောက်ကနေပါလာကြစမြဲဘဲ..အဆင်ပြေမှာပါဒို့လဲဝိုင်းကူညီကြတာပေါ့
ဤသို့တိုင်ပင်ကြပြီးရက်ပိုင်းးအတွင်းမှာပင် ကိုရီးယားမှ မိမိဆီဖုန်းဝင်လာသဖြင့် ကိုင်လိုက်တော့...ကိုရီးယားမှာ
လေ မသိဘူးလားပြောပြမှဘဲ ကောင်းကောင်းသိသွား၏၊ အဲဒီတော့မှသူကရွာအတွက်စာကြည့်တိုက်ဆောက်ချင်
ကြောင်းပြောလာရာ ဒါနဲ့ မိမိကဟာအတော်ဘဲဗျာဟိုတလောလေးကမှဒို့လည်းမင်းစိုးနဲ့စာကြည့်တိုက်အကြောင်း
ပြောဖြစ်ကြတယ်ဟ..ဒီတော့ ဦးဆန်းထွန်းက ဟုတ်ပြီ စာကြည့်တိုက်အဆောက်ဦးအတွက် ကျွန်တော်လှူသွား
ဒါနဲ့မိမိက အေးဟုတ်ပြီ..မင်းစိုးဆီ ဖုန်းဆက်ပေးမယ်လို့ကတိပေးလိုက်ပါတယ်၊အဲဒီအချိန်မှာကိုမင်းစိုးကအညာ
ရောက်နေပြီမဟုတ်လား.၊စာကြည့်တိုက်လေးအတွက် အလှူရှင်ပေါ်သွားခဲ့ပြီမို့ စိတ်ထဲမှာ ပြောမပြနိုင်အောင်
ဒီလိုနဲ့မိမိလည်းနွေရာသီအားလပ်ရက်မှာ သင်တန်းအတွက်မွေးရပ်မြေကို ပြန်သွားခဲ့ပြီး ဒီနှစ်စာကြည့်တိုက်ဖွင့်
ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုဒီလိုနဲ့ ရက်တွေကြာလာပြီးသည့်နောက်မှာတော့ ဦးဆန်းထွန်းဆီက ဖုန်းပြန်ဝင်လာလေပြီ၊
ကနေရွာပြန်ပြီးသိန်း(၃၀)ကျော်အကုန်ကျခံကာဆောက်လုပ်လှူဒါန်းခဲသဖြင့် ယ္ခုဆိုလျှင် ပြီးစီးတော့မည့်အခြေနေရောက်ရှိနေပြီ
တက်တော့မှာမို့ နေခြည်မှာ ရွှေရည်လောင်း ရပ်ရွာ့စာကြည့်ကျောင်းဟုပြောလိုက်ချင်ပါတော့သည်။
လုပ်အားဒါနလှူဒါန်းနေကြသည့် အမျိုးသမီးများ စာဖတ်နေကြသည့်ကျောင်းသူ ကျောင်းသားလေးများ
ပို့စ်တင်သူ- ဆန်းသစ်အောင် ===အချိန် 12/02/20090ဦးက ဒီလိုမြင်တယ်
နိုဝင်ဘာလ (၂၄)ရက် သတင်း။
ကျေးဇူးတော်ရှင် နိုင်ငံကျော်ဓမ္မကထိက ပြည်တွင်းပြည်ပသာသနာပြု ဖြူးဆရာတော်ဘုရားကြီး ဘဒ္ဒန္တနရပတိသည် အာရှတော်ဝင်ဆေးကုခန်းတွင် (၂၄-၁၁-၂၀၀၉) နံနက်(၇)နာရီ အချိန်တွင် ပျံလွန်တော်မူသွားပြီဖြစ်ပါ၍ ကြွင်းကျန်ရစ်သော ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ရုပ်ကလပ်တော်အား (၃၀-၁၁-၂၀၀၉) ရက်နေ့တွင် မီးသဂြိုလ်မည်ဖြစ်ပါကြောင်းကို ရပ်ဝေးရပ်နီးမှ ဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းတို့အား ဝမ်းနည်းစွာ အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။
အစီစဉ်အသေးစိတ်ကို ဆရာတော်ဦးအဂ္ဂဝရနှင့် ဆက်သွယ်၍ ဆက်လက် ဖေါ်ပြပေးသွားပါမည်။
ကြည်ညိုလေးစားခင်မင်ရပါသော ဆရာတော်အရှင်သူမြတ်များ၊ ဓမ္မမိတ်ဆွေများနှင့် ဓမ္မဘလော့ဂ်ဂါ ညီအကို မောင်နှမအပေါင်းတို့ (ဘုရား) ခင်ဗျား.....
ကျေးဇူးတော်ရှင် နိုင်ငံကျော်ဓမ္မကထိက ဖြူးဆရာတော်ဘုရားကြီး ရဲ့ သီလဂုဏ်၊ သမာဓိဂုဏ်၊ ပညာဂုဏ်တို့ နှင့် ဗုဒ္ဓသာသနာတော်အတွက် အားထုတ် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လုပ်ဆောင်ခဲ့မှုများကို အာရုံပြုကြည်ညိုနှလုံးသွင်း၍ အထက်ပါသတင်းစာသားကို ဓမ္မမိတ်ဆွေများ၏ ကိုယ်ပိုင် အင်တာနက်ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များနှင့် အီးမေးလ်များမှတဆင့် ထပ်ဆင့် ဖြန့် ဖြူးဝေမျှပေးပါရန် လေးစားစွာဖြင့် မေတ္တာရပ်ခံ ပန်ကြားအပ်ပါတယ်ခင်ဗျား။
ပို့စ်တင်သူ- ဆန်းသစ်အောင် ===အချိန် 11/28/20090ဦးက ဒီလိုမြင်တယ်
ဖြူးဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ အန္တိမဈာပနအခမ်းအနား
ဖြူးဆရာတော်ဘုရားကြီးအား ပူဇော်သောအနေဖြင့် ယနေ့ည (၂၅-၁၁-၂၀၀၉)မှ စ၍ ငါးညတိုင်တိုင် တရားပွဲများကို ကျင်းပမည်ဖြစ်ပါသည်။ တစ်ညလျှင် ဆရာတော်နှစ်ပါးကျစီ တရားဟောကြမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ဘုန်းဘုန်း ဦးအဂ္ဂဝရမှ မိန့်တော်မူသည်။
၂၅-၁၁-၂၀၀၉ - ပျဉ်းမနားဆရာတော် ဦးဇဋိလနှင့် ဆရာတော်ဦးသုမင်္ဂလ (ဒယ်အိုးဆရာတော်)
၂၆-၁၁-၂၀၀၉ - မြစ်သားဆရာတော်ဘဒ္ဒန္တဝါသဝနှင့် တိပိဋက စွန်းလွန်းဆရာတော်ဦးသုန္ဒရ
၂၇-၁၁-၂၀၀၉ - (၁၂)ဘွဲ့ရ ကျိ်ုက်ထိုဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တနန္ဒောဘာသာဘိဝံသ နှင့်
၂၈-၁၁-၂၀၀၉ - ဒေါက်တာကောဝိဒ နှင့် ပဲနွယ်ကုန်းဆရာတော် ဦးစန္ဒာဝရ
၂၉-၁၁-၂၀၀၉ - ညောင်ကန်အေးဆရာတော် အရှင် ဣန္ဒက နှင့် ဝါးခင်းကုန်းဆရာတော် ဦးတိက္ခ
၃၀-၁၁-၂၀၀၉ - ယင်းနေ့တွင် အန္တိမဈာပနအခမ်းအနားကို နေ့လည် (၁၂)နာရီတိတိ အချိန်တွင် စတင်ကျင်းပ မည်ဖြစ်ပြီး၊ ဖြူးဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ထေရ်ဆရာ အရှင်များဖြစ်ကြသော မြတောင် ဆရာတော်ဘုရားကြီးနှင့် ပေါက်မြိုင် ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့မှ သီလပေးသြဝါဒချီးမြှင့်ပေးကြမည်ဖြစ်ပါသည်။
ထို့နောက် သီတဂူဆရာတော်ဘုရားကြီး အရှင်ဥာဏိဿရမှ ရေစက်သွန်းချ အမျှပေးဝေပြီးနောက်တွင် ဖြူးဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ရုပ်ကလပ်တော်ကို ဆရာတော်ဘုရားကြီးများနှင့် တပည့်သံဃာများ၊ အစိုးရအဖွဲ့ဝင် လူကြီးမင်းများ၊ ဂေါပကအဖွဲ့ဝင်လူကြီးများ၊ တပည့်ဒကာ ဒကာမများနှင့် ဖြူးဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ဆွေတော် မျိုးတော်များမှ အဖွဲ့သုံးဖွဲ့ ခွဲကာ မင်းခမ်းမင်းနားဖြင့် ရေဝေးသုဿန်သို့ ပင့်ဆောင် မီးသဂြိုလ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ဖြူးဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ကြွင်းကျန်ရစ်သော အရိုးပြာကို ဈာပနပွဲအပြီး တစ်ပတ်ခန့်အကြာတွင် ပဲခူးတိုင်း၊ ဖြူးမြို့နယ်ရှိ ဖြူးမဟာစည်သာသနာ့ရိပ်သာ မူလကျောင်းတိုက်သို့ မြို့နယ်သံဃာနာယကအဖွဲ့ဆရာတော်များ၊ တာဝန်ရှိလူကြီးမင်းများ၊ တပည့်သံဃာတော်များနှင့် ဒကာ ဒကာမများမှ ပင့်ဆောင်ကြမည်ဖြစ်ပြီး ရိပ်သာတွင် သုံးညတိုင်တိုင် တရားပွဲများ ဆက်လက်ကျင်းပမည်ဖြစ်ပါသည်။
ထို့နောက် ဖြူးဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ကြွင်းကျန်ရစ်သော အရိုးပြာကို ဖြူးချောင်းတွင် ရေမျှောပူဇော်မည်ဖြစ်ပါ ကြောင်းကို ကမ္ဘာတစ်ဝန်းတွင် ရောက်ရှိနေကြပါသော ဓမ္မမိတ်ဆွေ မြန်မာနိုင်ငံသားများအားလုံးသို့ စေတနာရှေ့ထား၍ အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။
ဝိမုတ္တိသုခ ဘလော့မှ ကူးယူတင်ပြခြင်းဖြစ်သည်။
ဒီတစ်ပတ်တော့ မျိုးဆက်သစ်လေးများရဲ့မြူးကြွရွှင်ပျော် တေးသရုပ်ဖော်အကလေးများနဲ့အလည်
အပိုင်း(၃)ကိုအွန်လိုင်းပေါ်မှတဆင့်တောင်းဆိုထားတဲ့ ဦးဆန်းထွန်း(ခေတ္တ-ကိုရီးယား) အတွက်လည်း
ကျွန်တော်အနေနဲ့ မျိုးဆက်သစ်ကပွဲအပိုင်း(၁)အပိုင်း(၂)များကိုဤဘလော့မှာတင်ခဲ့စဉ်က အဆင်ပြေခဲ့
သော်လည်း ဤအပိုင်း(၃)ကို တင်ရာမှာတော့ အဆင်မပြေမှုများစွာနဲ့ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါသည်၊။
ပုံမှန်အားဖြင့်ပြီးခဲ့သည့်အပိုင်းများကို(၈)မိနစ်စာခွ္စဲ၍ you Tubeဆိုက်တွင် upload ပြီးတင်ရာမှာလွယ်ကူခဲ့
လားမပြောတတ်ပါ။ အခုတော့ မမျှော်လင့်ဘဲ အဆင်ပြေသွားသဖြင့် ပင်ပန်းရကျိုးနပ်ပါပြီ..ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ်
ကျေနပ်ပါတယ်..အလည်ရောက်လာသူအားလုံး ကပွဲကြည့်ပြီး ကြည်နူးပျော်ရွှင်ကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြုလျှက်
ပို့စ်တင်သူ- ဆန်းသစ်အောင် ===အချိန် 11/25/2009 1 ဦးက ဒီလိုမြင်တယ်
ပြည်ကတောမြို့တွေထက်တော့သာတယ်ဗျ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းတော့ အင်တာနက်
ပြောစကားအရ ယခုအချိန်ထိအဲဒီဝန်းကျင်မှာ မြန်မာကြက်စစ်စစ်ဆိုလျှင် ယိုးဒယားကြက်ထက်ဈေးပို
ပေးကြကြောင်းပြောပြလေရဲ့။ဒါကြောင့် ယိုးဒယားလူအချို့ကသူတိူ့ကြက်ကို မြန်မာကြက်ဟုလိမ်ညာပြီး
လူကြီးတစ်ယောက်ပမာ ပြောဆို ဧည့်ခံတတ်သည့် မြန်မာခလေးမလေးအိအိဖြိုးအားတွေ့ရစဉ်
ဤကလေးမလေးဟာ အသက်အရွယ်အားဖြင့် ငါးနှစ်ခန့်သာ ရှိသေးသော်လည်း
လူကြီးတစ်ယောက်ပမာ ကျွန်တ်ာအား နှုတ်ဆက်ဧည့်ခံခဲ့သဖြင့် တော်တော်လေးသံယောဇဉ်
ဖြစ်ခဲ့မိသည်မှာ အမှန်ပင်၊သူတို့အိမ်သွားပြီးထမင်းစားတဲ့နေ့က မှတ်မှတ်ရ ဘာပြောခဲ့သလဲ
ဆိုတော့ "ဦးနော် ဒီစားပွဲပေါ်က ဟင်းတွေကို အကုန်စားရမှာ..မစားရင် ပြန်မလွှတ်ဘူး"တဲ့
ဘန်ကောက်ကိုပြန်မယ့်နေ့က ကားဂိတ်ကို သူ့ဖေကို လိုက်ပို့ခိုင်းပြီး လာနှုတ်ဆက်
တော့လည်း ယိုးဒယားလိုပြောပြီးနှုတ်ဆက်သွားလေရဲ့ဗျာ... လွန်ဖိ ချုပ်ဒီးနခပ်တဲ့..
ပြန်သွားတဲ့ပုံရိပ်လေးကတော့ ဒီခရီးစဉ်မှာတော့ ဘယ်လိုမှမေ့လို့မရတဲ့ အမှတ်တရ
ဆိုတတ်သလိုမြန်မာစကားကိုလည်း ကောင်းစွာ ပြောဆိုနိုင်သည့်ကလေးဖြစ်ပြီး ကျွန်တော်ကဓာ
တ်ပုံရိုက်နေစဉ်မှာ ယိုးဒယားသူဋ္ဌေးတစ်ဦးကအနားလာပြီး သူ့ဆီကို မေးမှတစ်ဆင့် ကလေးဓာတ်ပုံ
ကို ပို့ပေးဘို့ ပြောလာပါတယ်၊ကျွန်တော်အထင်တော့ မြန်ာကလေးတစ်ယောက်က သူတို့ယိုးဒယား
ပို့စ်တင်သူ- ဆန်းသစ်အောင် ===အချိန် 11/12/20090ဦးက ဒီလိုမြင်တယ်
ခရီးသွားနေစဉ်ကာလအတွင်း ဘလော့လေးနဲ့ ခွဲခွါနေရဦးမှာမို့ ပို့စ်အသစ်မတင်နိုင်သေးတာကို
ခရီးကပြန်လာမှဘဲ ပိုစ့်အသစ်တွေတင်ပေးသွားပါ့မယ်..အောက်ကကဗျာလေးနဲ့ နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါရစေ..
ပို့စ်တင်သူ- ဆန်းသစ်အောင် ===အချိန် 11/06/20090ဦးက ဒီလိုမြင်တယ်
ပျိုငယ် ၊အိုပယ် ဆိုတာကိုလဲ
လက်တို့ ပြီးတော့ ပြောရဦးမယ်(နားထောင်ကြနော်)
၁။ငါတို့နေရာ ဤကမ္ဘာ ချက်တာခေတ်စားသည်။
၂။ချက်တင်စေရာ မနေသာ ဖွေရှာချက်ရသည်။
၃။ငါနှင့်ရွယ်တူ ငါ့အောက်လူ ကြီးသူတွေလဲ ချက်ကြသည်။
၄။ချက်တဲ့ထဲမှာ အများစုဟာ လူလိမ်တွေက များလှသည်။
၅။ချက်တင်မှာဘဲ ထိုင်နေမြဲ ဒူလာစွဲဘို့ နီးခဲ့ပြီ။
ပို့စ်တင်သူ- ဆန်းသစ်အောင် ===အချိန် 10/24/20090ဦးက ဒီလိုမြင်တယ်
ဘန်ကောက်မြို့ရှိ မြန်မာဒကာ၊ ဒကာမများစုပေါင်း၍ ယမန်နေ့က ဘန်ခဲ ၀ပ်တလုံးကျောင်းတိုက်တွင် ကထိန်သင်္ကန်းကပ်ပွဲကို အကြီးအကျယ် ကျင်းပနိုင်ခဲ့သဖြင့် နောက်လာမည့် မြန်မာစာသင်သားရဟန်းတော်များအတွက် လမ်းပွင့်သွားစေကြောင်း အဆိုပါကျောင်းတိုက်မှ စာသင်သား သံဃာတဦးဖြစ်သည့် ဦးကုဏ္ဍလက မိန့်ကြားသည်။
“ဦးဇင်းတို့ မြန်မာစာသင်သား ရဟန်းတော်တွေအနေနဲ့ ဘန်ကောက်မှာ စာလာသင်တဲ့အခါ နေထိုင်ရေးက အရမ်းအခက်အခဲ ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် မြန်မာစာသင်သား သံဃာတော်များကို နေထိုင်ခွင့်ပေးတဲ့ ကျောင်းတိုက် အတော်ရှားပါတယ်။ အခုဒီ ၀ပ်တလုံးဆရာတော်ကြီးကတော့ မြန်မာစာသင်သား ရဟန်းအများအပြားကို နေထိုင်ခွင့် ပေးထားတဲ့အပြင် မြန်မာဒကာ၊ ဒကာမတွေရဲ့ ကထိန်ပွဲပြုလုပ် လှူဒါန်းခွင့်ကိုလည်း ခွင့်ပြုပေးခဲ့တဲ့အတွက် ဦးဇင်းတို့ လက်ထက်သာမက နောင်လာမယ့် မြန်မာစာသင်သား ရဟန်းတော်တွေအတွက်ပါ အလားအလာကောင်းတွေ ရှိသွားစေတာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု အဆိုပါသံဃာတော်က မိန့်ဆိုသည်။
မြန်မာစာသင်သား ရဟန်းတော်များသည် သီရိလင်္ကာ၊ အိန္ဒိယ၊ နိပေါနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံတို့တွင် အများဆုံး စာပေသင်ကြားနေကြရာ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် မြန်မာဘုန်းကြီးကျောင်း မရှိခြင်းကြောင့် သီတင်းသုံးနေထိုင်ရေးအတွက် အခက်တွေ့ကြရသည်။
“ဒီမှာက မြန်မာဘုန်းကြီး ကျောင်းထိုင်တဲ့ကျောင်း မရှိသေးဘူး။ ဦးဇင်းတို့အနေနဲ့ မဟာချူလာလောင်ကွန် ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် တက်ခွင့်ရပေမယ့် နေထိုင်ရေးကျတော့ အခက်တွေ့ကြရတယ်။ ၀ပ်တလုံးဆရာတော်ကြီးက အရိပ်ခိုလှုံခွင့်ပေးထားလို့သာ အခုလို မြန်မာရဟန်းတော်တွေ များများစုဝေး သီတင်းသုံးခွင့်ရခဲ့ကြတာ” ဟု ဦးပညာက မိန့်ဆိုသည်။
ဘန်ခဲ ၀ပ်တလုံးကျောင်းတိုက်တွင် မြန်မာစာသင်သားရဟန်းတော် (၅၂) ပါးအပြင် ကမ္ဘောဒီးယား၊ လာအို၊ ဘင်္ဂလားဒေရှ့်မှ စာသင်သား ရဟန်းများကို ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်ကြီးက နေထိုင်ခွင့်ပြုထားသည်။
၀ပ်တလုံးကျောင်းထိုင်ဆရာတော် ဖရမဟာဘုန်းထိန်ဇုတိနြေ္ဓာက “ထိုင်း၊ မြန်မာ၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ လာအိုဆိုတာ နိုင်ငံတွေ ကွဲပြားနေပေမယ့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ အများဆုံးရှိနေကြတာမို့ ဘုန်းကြီးအနေနဲ့ကတော့ အားလုံးဟာ အတူတူပဲလို့ မြင်မိတယ်” ဟု မိန့်ဆိုသည်။
မြန်မာစာသင်သားရဟန်းအများအပြား သီတင်းသုံးနေသည့် အဆိုပါကျောင်းတိုက်တွင် ယမန်နေ့က ဖလန်ဆန်စာထုပဒီ၊ ဖုထပူချာ (၄၄)၊ ဖိကာစင် ၆၂/၁ စသည့် အထည်ချုပ်စက်ရုံ (၃) ရုံမှ မြန်မာလုပ်သားများ ဦးဆောင်၍ ကထိန်သင်္ကန်းကပ်လှူပွဲ ကျင်းပရာ မြန်မာ ဒကာ၊ ဒကာမ (၁,၀၀၀) ခန့် လာရောက်လှူဒါန်းခဲ့ကြသည်။
“အရင်က ကျနော်တို့အနေနဲ့ လှူချင်တန်းချင်ရင်တောင် အခက်အခဲတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ အခုတော့ ဒီကျောင်းမှာ မြန်မာသံဃာတွေလည်းရှိ၊ ဆရာတော်ကလည်း ခွင့်ပြုဆိုတော့ ပထမအကြိမ် ကထိန်သင်္ကန်းကပ်ပွဲ လုပ်နိုင်ခဲ့ကြတာပါ။ အလုပ်သမားတွေမှာ အလုပ်လုပ်ခွင့်ကတ်ရှိပေမယ့် နယ်ကျော်အခက်အခဲရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဖမ်းအဆီးမရှိအောင် ၀ပ်တလုံးဆရာတော်က စီစဉ်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်လည်း ဒီလောက်များများစားစား လာရောက်နိုင်ကြတာပါ။ ဒီလောက် လူများလိမ့်မယ်လို့ ကျနော်တို့ ထင်မထားခဲ့ဘူး”ဟု ကထိန်ပွဲဖြစ်မြောက်ရေး ဦးဆောင်စီစဉ်ခဲ့သူတဦးဖြစ်သည့် ကိုရေချမ်းက ပြောသည်။
အထည်ချုပ်စက်ရုံများမှ မြန်မာလုပ်သားများဦးဆောင်သော ကထိန်သင်္ကန်းကပ်ပွဲတွင် ဘတ်ငွေ (၁၃၀,၀၀၀) ကျော် လှူဒါန်းနိုင်ခဲ့ကြပြီး ငါးထပ်ကျောင်းဆောင် တည်ဆောက်ရေးအတွက်လည်း ဘတ်ငွေ (၂၄,၀၀၀) ကျော် လှူဒါန်းခဲ့ကြသည်။
“ကျနော်တို့ရဲ့ ချွေးနဲစာလေးတွေထဲက တလလောက်ကြိုစုပြီး လှူဒါန်းခဲ့ကြတာပါ။ အခုလို လှူဒါန်းခွင့်ရတဲ့အတွက် အများကြီး ပီတိဖြစ်ရပါတယ်။ နောက်နှစ်တွေမှာလည်း ဆက်လုပ်ဖြစ်သွားအောင် ကြိုးစားကြမှာပါ။ ကျနော်တို့ စက်ရုံတွေကတစ်လတစ်ကြိမ်စုပေါင်းပြီးဆွမ်းကပ်နေသလိုဓမ္မစင်္ကြာဝတ်အသင်းလည်းလည်းဒီကျောင်းမှာဘဲဖွဲ့
ပို့စ်တင်သူ- ဆန်းသစ်အောင် ===အချိန် 10/20/20090ဦးက ဒီလိုမြင်တယ်
တန်ဆောင်တိုင်ဖူးစာ စင်တင်ပြဇာတ်အား မကြာမှီတင်ဆက်ပေးသွားမည်
ပို့စ်တင်သူ- ဆန်းသစ်အောင် ===အချိန် 10/18/20090ဦးက ဒီလိုမြင်တယ်
စုပေါင်းရွှေဆံပင်လှူဒါန်းပွဲ အခမ်းအနားတစ်ရပ်ကျင်းပ (ရန်ကုန်)
စစ်ကိုင်းတိုင်၊ မုံရွာခရိုင်၊ ယင်းမာပင်မြို့နယ်၊ ပုလဲမြို့နယ်အတွင်းရှိ အလောင်းတော်ကဿပနှင့် အမေရေယာဉ် နန်းရင်းသို့သွားရာ ပင်မလမ်းမကြီးဖြစ်ဖြစ်သည့် ကျေးရွာပေါင်း(၆၀)ကျော်၊ လူဦးရေ(၅၀၀၀၀)ကျော်တို့၏ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ ကျမ်းမာရေးစသည့်တို့အတွက် မှီခိုအားထားရာဖြစ်သော လည်ငေါက်၊ ချင်ပြစ်သို့သွားရာလမ်းဝယ်၊ မြန်မာအမျိုးသမီးများ၏ စွမ်းအားဖြင့် တည်ဆောက်မည့် ရွှေဆံပင်တံတားအတွက် ရန်ကုန်ရွှေမြို့သူများ၏ စုပေါင်း ဆံပင်လှူဒါန်းပွဲတစ်ရပ်ကို တိပိဋကမဟာဂန္ဓာရုံကျောင်းတိုက်အတွင်း၌ (၉-၁၀-၂၀၀၉)ရက်နေ့က ကျင်းပရာ သတင်းဌာန များနှင့် မီဒီယာများမှ လာရောက်ကြပြီး သတင်းများမေးမြန်းကြရာ၊ အလွှာအသီးသီးမှ အလှူရှင်များသဒ္ဓါတရား ထက်သန်စွာဖြင့် လာရောက်လှူဒါန်းခဲ့ကြသည်။ ယခုအခါ ရန်ကုန် ရွှေမြို့သူများအနေဖြင့် လာရောက်လှူဒါန်းထားသော ဆံပင်များအဖြစ် လူဦးရေ(၃၈၀)ကျော်၊ ဆံပင်ပိဿာ အားဖြင့်(၂၈) ပိဿာရှိပြီး၊ လှူဒါန်းထားသော ငွေများအနေဖြင့် ကျပ်(၇)သိန်းကျော် ရှိသွားပြီဖြစ်သည်။ မကြာခင်အချိန်မှာ ကျင်းပပြုလုပ်မည့် စုပေါင်းရေစက်ချပွဲကိုလည်း ကျင်းပသွား မည်ဖြစ်ရာ၊ ကျင်းပပြုလုပ်မည့် ရက်အားလည်း ဂျာနယ်များနှင့် သတင်းစာများမှာ ထပ်မံကြေငြာသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ လာရောက်လှူဒါန်းလိုသော အလှူရှင်များအနေဖြင့် အရှင်ဉာဏိဿရ၊ တိပိဋကမဟာဂန္ဓာရုံကျောင်း၊ ကမ္ဘာအေး၊ မရမ်းကုန်း၊ ရန်ကုန်၊ ဖုံး-၀၉-၅၁၂၁၈၉၁နှင့် အရှင်ရာဇိန္ဒ၊ အမှတ်(၆)၊ ရွှေပိဋကတ်တိုင်၊ ရွှေတိဂုံဘုရား အရှေ့ဘက်မုဒ်အနီး၊ အာဇာနည်လမ်း၊ ဗဟန်း၊ ဖုံး-(တဆင့်)၃၈၄၃၆၃-သို့ ဆက်သွယ်လှူဒါန်း နိုင်ပါကြောင်း သိရှိရ ပါသည်။
ပို့စ်တင်သူ- ဆန်းသစ်အောင် ===အချိန် 10/12/20090ဦးက ဒီလိုမြင်တယ်
Web-Stat support : your account santhitaung09 has expired
show details 6:18 PM (8 hours ago)
Your 30-day free trial Web-Stat account has expired
your user ID: santhitaung09
your password: (...............)
monitoring : http://santhitaung.blogspot.com
To review your web site traffic stats, click on the link below:
Your account still exists but it will not register any new visits. We will keep it on file for another6days ; during this period, you will be able to re-start your web site traffic analysis simply by registering from :
Remember that registration will make your Web-Stat account permanent. It starts at $5 per month (foraregular account) and is completely risk-free since it can be canceled at any time.
If you have any questions or concerns, feel free to write back and we'll do our very best to help.
We would like to thank you very much for having tried Web-Stat on your site and we sincerely hope that you will choose to stay with us !
The Web-Stat support team
ပို့စ်တင်သူ- ဆန်းသစ်အောင် ===အချိန် 10/09/20090ဦးက ဒီလိုမြင်တယ်
ပို့စ်တင်သူ- ဆန်းသစ်အောင် ===အချိန် 10/07/20090ဦးက ဒီလိုမြင်တယ်
6 Oct 09, 18:20
flowerpoem: တစ်ခု၂ Announce လုပ်တာဖြစ်မှာပါ..
6 Oct 09, 18:19
flowerpoem: ကျွန်မတို့မေးထဲ့တော့အဲဒီစာမလာဘူးရှင့် Blogspot ကသက်တမ်းပြည့်တယ်ဆိုတာ
မရှိဘူး co.cc ပဲဖြစ်တာပါ
6 Oct 09, 13:09
flowerpoem: ကိုဆန်းသစ်အောင် အလည်လာပါတယ် ဘာကို ဆိုလိုတာလည်း မသိဘူး
ဘလော့မှတ်ပုံတင်ဆိုတာ သေချာနားမလည် ဖူး ဖြစ်နေလို့ပါ
4 oct 09,3:32
နှင်းဆီပန်းချစ်တဲ့ကောင်မလေး: မေလေးဆီလဲ အဲလိုမေးမျိုးလာဖူးတာပါဘဲ ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး
4 Oct 09, 00:46
အရာတော်မြေ: ကိုဆန်းသစ်ရေ .. Domain ပြောင်းဗျာ .. အဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်ဗျ
(ကျေးဇူးတင်ရှိခြင်း) ဘလော့နှင့်ပတ်သက်ပြီးစိတ်ထဲမှာ သံသယဖြစ်နေသော ကျွန်တော်အား
ပို့စ်တင်သူ- ဆန်းသစ်အောင် ===အချိန် 10/06/20090ဦးက ဒီလိုမြင်တယ်
(ထူးခြားချက်)ဤပို့စ်တင်ဘို့ စာရိုက်နေစဉ်မှာ မမျှော်လင့်ဘဲ helpdesk@web-stat.comမှမိမိ
ပို့စ်တင်သူ- ဆန်းသစ်အောင် ===အချိန် 10/02/20090ဦးက ဒီလိုမြင်တယ်
" လာရောက်လည်ပတ်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်..နောက်တစ်ကြိမ် ပြန်လာလည်ဘို့အတွက်လည်း ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ..
လာလည်သူ အားလုံး မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ.....
ဘောလုံးပွဲများ High Lightကြည့်ရှုရန်
ထိုင်း TV Channel ရုပ်သံလိုင်းများ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အာဂျင်တီးနားမှာ တရားစွဲဆိုမှု အချုပ်အခြာထိပါးတယ်လို့ NLD ပြော
လူ့ဘုံထုံးစံ ကဲ့ရဲ့ဒဏ်ဖြင့် ရန်မာန်ပိတ်သဲ ခရီးခဲ၌ စိတ်ဇွဲသန်သန် နောက်မပြန်ဘဲ ရဲမာန်ရဲသွေး ရဲစိတ်မွေးလျှက် ရဲသွေးနီနီ စီရရီဖြင့် ဦးတည်မပျက် ရှေ့သို့ဆက်လော..
ဆရာတော် ဦးသုမင်္ဂလ ဘ၀နတ်ထံ ပျံလွန်တော်မူ
ဦးသုမင်္ဂလ(သက်တော်၄၁-နှစ်၊သိက္ခာတော်-၂၁-၀ါ ) ထိုင်းနိုင်ငံ၊ဘန်ကောက်မြို့၊ကျလန်(၁၃)လမ်း၊သလပ်ဘန်ခယ်၊၀ပ်...
“ကိန္နရီ ကိန္နရာတို့ လူစကားမပြောကြခြင်းရဲ့းအကြောင်း(၂)ချက်
အင်္ဂုတ္တိုရ်ပါဠိတော်မှာ ဘုရားရှင်က ကိန္နရာတို့ လူစကားမပြေားရခြင်း အကြောင်းနှစ်မျိုးကို မိန့်တော်မူတယ်။ “ ရဟန်းတို့၊ ကိန္နရာတို့ဟာ အကျိ...
ထိုင်းဘုရင်မ သီရိခေတ်၏ (၈၀)နှစ်ပြည့် မွေးနေ့(သို့မဟုတ်)အမေနေ့
ဘုရင်မကြီး သက်တော်ရာကျော် ရှည်ပါစေဟု ထိုင်းသံဃာတော်များမှ ဆုတောင်းပေးနေကြစဉ်(အောက်ပုံ) ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ၄င်းတို့၏ဘုရင် မွေး...
ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဘန်ကောက်မြို့မှ မြဘုရားသမိုင်း
နှစ်ယောက်တွဲလျှောက်မှာလား တစ်ယောက်တည်း လျှောက်မှာလား
ဘ၀သံသရာခရီးကို လျှောက်လှမ်းကြတဲ့အခါမှာ တစ်ယောက်တည်း လျှောက်လှမ်းကြတာ ရှိသလို နှစ်ယောက်တွဲပီး လျှောက်လှမ်းကြတာလည်း ရှိပါတယ်..တစ်...
2013-ခုနှစ်အတွက် လက်ပံတောင်း မဟာသင်္ကြန်စာ
သိကြားမင်းသည် ပြည်သူ့ချဉ်ဖတ် စစ်အာဏာရှင်များ စုပေါင်းဖွဲ့စည်းထားသည့် စီးပွားရေးငတ်ကြီးကျ ဦးပိုင်နှင့် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဖြစ်သည့် ...
ထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာမိသားစုများရဲ့ စုပေါင်းဆင်နွဲ အတာသကြန်ပွဲ
ဘန်ကောက်တွင် မြန်မာမိန်းခလေးတစ်ဦး ကားတိုက်ခံရ၍ ပွဲချင်းပီးသေဆုံး
မချိုနွယ်ထွန်း၏ ရုပ်အလောင်းအား မီးသဂြိုလ်စက်သို့ သယ်ဆောင်နေကြစဉ် မချိုနွယ်ထွန်းအားသူမ၏အလုပ်ရှင်သူဌေးမက နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်နေစဉ် ကွယ်လွန်သူ...
လူငယ်နဲ့ ချစ်သူများနေ့(Valentine Day)အကြောင်း တစေ့တစောင်း
လူငယ်တို့ သဘာဝ ချစ်ကြ ကြိုက်ကြ ကြည်နူးကြ လွမ်းကြ ရင်ခုန်ကြရန်ဖြစ်ကြ ပြန်ချစ်ကြနဲ့ အချစ်ရဲ့အရသာကို ခံစားတတ်ကြသည်မှာသဘာဝမို့ မိမိအနေဖြင့် ...
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ(သီဟို)၊ တောင်ထိပ်နန်းတော်ဟောင်းနေရာသို့ တစ်ခေါက်(သို့မဟုတ်) စိဂိရိယတောင်သမိုင်း
စိဂိရိယတောင်အား အဝေးမှ တွေ့ရစဉ် စိဂိရိယတော...
တန်ဆောင်တိုင်ဖူးစာ စင်တင်ပြဇာတ်အား မကြာမှီတင်ဆက်ပေ...
စုပေါင်းရွှေဆံပင်လှူဒါန်းပွဲ အခမ်းအနားတစ်ရပ်ကျင်းပ ...
နွေရာသီ ယဉ်ကျေးမှုသင်တန်း ပုံရိပ်များ